Wasaaradda qorshaynta Soomaliya iyo kuwa Dowlad goboleedyada oo ka wada hadlay qorshaha horumarinta Qaranka – Radio Muqdisho
Wasaaradda qorshaynta Soomaliya iyo kuwa Dowlad goboleedyada oo ka wada hadlay qorshaha horumarinta Qaranka
Kulan wada tashi ah oo ay wada yeesheen Wasaaradda qorshaynta Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu lafa guray halka uu marayo qorshaha horumarinta Qaranka.
Shirka Golaha horumarinta Qaranka ayaa si wayn looga hadlay diyaarinta qorshaha horumarinta oo heer gabo-gabo ah maraya, kaasi oo dhowaan lagu wado in la hor geeyo golaha Wasiirrada si ay u meel mariyaan.
Qorshahan ayaa sida ku cad waxaa ka mid ah siyaasadda deeqaha Caalamka uu siiyo Soomaaliya, kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka , khayraadka, horumarinta wax soo saarka , dhismaha Waddooyinka , kaabayaasha dhaqaalaha, Shaqo abuurka Dhallinyarada, maalgashiga ganacsiga ,maaraynta Biyaha iyo xoojinta dowladnimada .
Wasiirka Wasaaradda Qoshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, mudane; Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in qorshahaan uu wax badan ka duwan yahay kuwii hore, maadaama ay haatan Soomaaliya ganacteeda ku sameeysaneyso si loogu saleeyo baahiyaha dalka ka jira.
Asad Yuusuf Qanyare, Maareeyaha horumarinta qorshaha qaranka ayaa sheegay in ay maalmaha soo socdo ay horgayn doonaan qorshahaan golaha Wasiirada, si loo meel mariyo.
Golaha Wasiirrada xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Novembar 2018kii kii meel mariyay geeddi socodka qorshaha Qaranka, kaas oo la doonayo in lagu shaqeeyo Shanta Sana ee soo socota.
Ra’iisul wasaaraha Qatar oo xafiiskiisa ku qaabbilay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliya
Shaqaale ka tirsan hay’adda socdaalka Soomaaliya oo uu tababar ugu furmay Denmark+Sawirro